Amasu Asemqoka Okukhangisa Nge-imeyili | Martech Zone
Amasu Asemqoka Wokumaketha Nge-imeyili
ULwesibili, April 29, 2014 ULwesithathu, April 30, 2014 Douglas Karr
Ukumaketha nge-imeyili kuyaqhubeka nokuba yindlela eqinisekile yokuxhuma kabusha, ukugcina nokuheha amakhasimende. Ngenkathi zikhona izinselelo zokungena ku-inbox, kusekhona amasu aveza imiphumela yamaqembu wokukhangisa we-imeyili akhiqiza kakhulu.
The 2014 Ukubalwa Kwezimboni Zezimakethe ze-Adestra / Econsultancy kuhlolwe ngaphezu kuka-1,100 abathengisi bedijithali futhi bathola ukuthi yiziphi izimfanelo ezibaluleke kakhulu ekwakheni ukumaketha kwe-imeyili iqembu lamaphupho.
Kunezibalo ezinhle zokuxhasa i- ama-imeyili amasu wokumaketha nge-infographic:
I-83% yezinkampani linganisela ukumakethwa kwe-imeyili njengokuhle noma okuhle kakhulu ekubuyiselweni kotshalo-mali.
63% yabathengisi chitha ngaphezu kwamahora amabili kudizayini nokuqukethwe kepha kuphela 17% chitha okungenani amahora amabili ekwenzeni kahle.
49% yabathengisi cabanga ukuthi ukwenziwa kokuzenzekelayo kokumaketha akuphumelelanga.
47% yabathengisi Nokwandisa i-imeyili ephathekayo kepha ama-61% ane- eziyisisekelo or engekho isu leselula.
Tags: imeyilii-imeyili ezenzakalelayoimeyili imikhuba emihlei-imeyili nokwenza kahlei-imeyili nokwenza kahleukubika nge-imeyiliiqembu le-imeyilii-imeyili ephathekayoukumaketha kwe-imeyili ephathekayoukumaketha amaselula
Uhlu lwakho Lokuhlola Lokuthola Impumelelo Yezobuchwepheshe!
Usebenzisa amasu wokumaketha kokuqukethwe kuma-imeyili e-B2B
Ngo-Apr 30, i-2014 ku-9: i-33 PM
I-imeyili ihlala iyithuluzi lokukhangisa elinamandla lamadivayisi eselula. Ngokukhula okusheshayo kokusetshenziswa kwe-smartphone kulo lonke elase-Asia nasemhlabeni wonke, futhi abathengisi banethuba legolide. Yinye esingenakukwazi ukuyinaka.